Fijery maso amin'ny dia nataon'ny mpanjifa fialantsasatra | Martech Zone
Fijery maso amin'ny dia nataon'ny mpanjifa fialantsasatra
Zoma, Desambra 7, 2018 Zoma, Desambra 7, 2018 Douglas Karr
Raha mbola tsy nisoratra anarana ianao dia tena tiako ny Eritrereto amin'ny Google tranokala sy gazety. Google dia namoaka fitaovana mahatalanjona hanampiana ireo mpivarotra sy orinasa hampitombo ny orinasan-tserasera. Tao amin'ny lahatsoratra vao haingana, nanao asa tsara izy ireo tamin'ny fakana sary an-tsaina ny dia nataon'ny mpanjifa 3 izay hita manomboka amin'ny Black Friday:
Ny lalana mankany amin'ny mpivarotra tsy ampoizina - manomboka amin'ny fikarohana finday, ny dia dia manome fahitana manokana momba ny persona manokana izay miantsena amin'ny Internet.
Ny fanapaha-kevitra hanamboatra na hisolo - fikarohana persona iray hafa amin'ny alàlan'ny birao ary avy eo amin'ny finday, ary mifandray amin'ny doka hahatratrarana fanapahan-kevitra amin'ny fividianana.
Ny fikatsahana lalao epic - gamer dia manadihady ny fividianana console manaraka, manao fikarohana amin'ny alàlan'ny finday sy amin'ny birao, mitsidika ireo tranokala mpivarotra sy tranokala hijerena ny fividianany manaraka.
Google dia manolotra fitiliana manan-danja, ao anatin'izany ny habetsaky ny fikarohana ataon'ny mpanjifa, ny fiankinan-doha amin'ny finday, ary ny zava-misy fa tsy mifantoka amin'ny fanomezana ireo mpanjifa ireo.
Tiako ianao hifantoka amin'ny lafiny roa izay tsy tokony ho tsikaritra:
Nihetsika ny olona teo anelanelan'ny fitaovana sy ny mpanelanelana - Vao haingana aho no nividy PlayStation vaovao. Somary nandeha an-telefaona kely aho teo am-pijerena fahitalavitra, namaky hevitra ary nijery bundles. Avy eo, rehefa mipetraka eo amin'ny latabatro aho dia mijery horonantsary ary mijery horonantsary famerenana. Nitsidika an'i BestBuy indroa mihitsy aza aho mba hahitako izay ananan'izy ireo. Namako iray dia gamer goavambe, noho izany dia niresaka taminy tamin'ny alàlan'ny Facebook aho ary nanapa-kevitra ny amin'izay hividy. Tamin'ny farany, nahita sarany lafo aho ary nividy azy tamin'ny alàlan'ny Wal-mart. Ka .. ny finday, ny birao, ny fikarohana, ny sosialy, ny hevitra ary ny antsinjarany dia samy nandray anjara tamin'ny diako.
Mandany fotoana be amin'ny fikarohana ny olona - Ireo dia ireo dia tsy ao anaty fivoriana iray monja, mihoatra ny herinandro sy volana maro. Zava-dehibe ny mahatadidy fa lany daty ny cookies, miova ny fampielezan-kevitra, mihetsika ny valin'ny fikarohana… mandritra ny fotoana anaovan'ny mpanjifa fikarohana momba ny fanapahan-keviny momba ny fividianana manaraka. Mba hitazomana ny vokatrao na ny serivisinao, dia mila mijanona tsy an-kijanona ianao amin'ny fitazonana azy ireo ho hita maso sy sarobidy aminy.
Mandany fikarohana taonina iray taonina ny olona - Tsy azoko lazaina aminao akory hoe ohatrinona ny novakiako, nojereko ary noresahiko talohan'ny nividianako ny rafitro. Holazaiko aminao fa nidina ny fanapahan-kevitro nividy rehefa nanohy ny fikarohana aho. Nividy ny kit Pro sy VR tamin'ny farany tamin'ny PlayStation aho taorian'ny nahitako ny hevitra sy ny fijerena horonan-tsary momba ny fahaiza-manao. Ary rehefa azoko ilay rafitra, dia nandeha niantsena aho indray hahazoana accessories fanampiny! Ny votoatiny dia tsy ny fanapahan-kevitro ihany, nitondra fivarotana fanampiny koa io.
Ity ny sary feno, Ao anatin'ny dia ataon'ny mpividy 3 mitady isan'andro:
Tags: mpividyfividianana mpanjifaMpanjanantanyhevitraSearch Marketingfanapahan-kevitra momba ny fiantsenanamieritreritra amin'ny GoogleWalmart
Torohevitra tsara indrindra ho an'ny paikady marketing amin'ny atiny arivo taona mahomby